सुनसान रातमा वित्यो पारसको जन्मदिन, परिवारका सदस्यहरु थाइल्याण्ड भ्रमणमा – YesKathmandu.com
सुनसान रातमा वित्यो पारसको जन्मदिन, परिवारका सदस्यहरु थाइल्याण्ड भ्रमणमा
काठमाडौं । लामो समयदेखि परिवारबाट एक्लो बस्दै आएका पूर्वयुवराज पारस शाहले आफ्नो जन्मदिन पनि परिवार विनै मनाएका छन्र । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह सपरिवार लिएर थाइल्याण्ड भ्रमणमा निस्केपछि पारस आफ्नो जन्मदिनमा एक्लै परेका हुन् । बुवा पूर्वराजा, आमा पूर्वरानी कोमल, पत्नी हिमानी, छोरा र छोरीहरु थाइल्याण्ड, सिंगापुर, मलेसियालगायतका मुलुक भ्रमणमा निस्केपछि उनी एक्लै परेका हुन् ।
उनको जन्मदिनमा कुनैपनि परिवारका सदस्य थिएनन् । केही आफ्न्तसहित उनले सुनसानसँग आफ्नो जन्मदिन मनाएका छन् । शुक्रबार पारसको ४५ औं जन्मदिनमा थोरै मात्रै शुभेच्छुकहरुको सहभागिता थियो । पूर्वराजा ४ पुसमा थाइल्याण्डतिर लागेका थिए । उनको भ्रमण टोलीमा १५ जना छन् । तर, पारस छैनन् । ज्ञानेन्द्र शाह करिब एक महिना थाइल्याण्ड नै वस्ने छन् ।
लौ चिन्नुहोस,कुन कलाकार कुन दलको मादल ?
One thought on “सुनसान रातमा वित्यो पारसको जन्मदिन, परिवारका सदस्यहरु थाइल्याण्ड भ्रमणमा”
जुनगादारी फुलेको लाई के को जन्मदिन मनाइ राख्ने र ,
हिन्दु राष्ट्रको माग गर्दै बानेश्वरमा बिशाल प्रर्दशन
एक वर्षसम्म बन्धक बनाएर बालिकाको निरन्तर बलात्कार
घुस लिँदालिँदै इञ्जिनियर रङ्गेहात पक्राउ
राष्ट्रपति पुत्रको निजी सचिवालय सितल निवासमा !
टीकापुर घटनामा मारिएका सात प्रहरीलाई मरनोपरान्त बढुवा
आफ्नो मताधिकार आफ्नै जिल्लाबाट प्रयोग गर्छु – योगेश
नेविसंघ महाधिबेशनपछि कांग्रेसका २ सय युवा नेता बेरोजगार
एमालेसहितको राष्ट्रिय सरकार बनाऔं